Xidigaha Paul Pogba iyo Lionel Messi oo kulan xasaasi ah yeeshay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsXidigaha Paul Pogba iyo Lionel Messi oo kulan xasaasi ah yeeshay
18/11/2018 B M Sports, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Magaalada ganacsiga ku caan baxday ee Dubai ayaa xalay waxaa isku arkay Captain-ka kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo xiddigga Manchester United ee Paul Pogba, iyagoo halkaas ku qaatay sheeko waqti dheer qaadatay.
Xiddigga reer France ayaa ka maqnaa safka xulkiisa ee ka qayb galay ciyaartii xalay ay qaasaraha kala kulmeen qaranka Netherlands kullan ka tirsanaa tartanka UEFA Nations League-ga, waxaana uu nasiinno u aaday dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Waxaa halkaasi ay ku kulmeen Messi iyo xaaskiisa, iyagoo ku caweeyay Salt Bae’s Turkish steak house.
Labada xiddig ayaa waqti aad u dheer halkaas, ku qaatay, iyagoo wadaagay sawirro ay baraha bulshada soo galiyeen, sidoo kalena Pogba uu soo bandhigay aqoonta uu u leeyahay ku hadlidda afka Spanish-ka ah.
Waqtigooda ugu badan, waxaa mawduuc u ahaa xiddigga Chelsea ee N’Golo Kante, iyadoo Pogba uu tilmaamay in Kante uu istaajiyay Messi, waxaana weeraryahanka Barcelona uu iska difaacay arrintaas isagoo qoslaya.
Ka hor inta aysan warbaahinta soo qabanin muuqaalka sheekada labada xiddig, waxa uu kullankaasi Manchester United ka dhigay mid ay taageerayaashooda aysan la dhicin, halka kuwa Barca ay usoo muuqaatay saansaan ku aaddan inay arrimo suuq ka wada hadleen.
Hase ahaatee, labada ciyaaryahan fadhigooda ma ahan mid ku saleysnaa sheeko la xiriirta suuqa kala iibsiga, walow ay jirtay in si aad ah la isula xiriiriyo Barcelona iyo Pogba dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
Southwest state to hold its presidential election next week
Madaxweyne Trump oo booqday khasaaraha uu geystay dabkii ka kacay magaalada California